सेफ्टीपिनले घोचिदिएँ त्याे अरिमट्ठे अङ्ग
क्रान्ति पराजुली काठमाडौं, २६ पुस
धुम्बाराही–अनामनगर । फर्किंदा अनामनगर–धुम्बाराही । नेपाल यातायातको यात्रा अति कष्टदायी हुन्थ्यो । च्यापिएर, चेप्टिएर, पेलिएर, थिचिएर पनि त्यही बस चढ्नुको विकल्प थिएन । एउटै रुटबाट पुगिने अरू कुनै सार्वजनिक यातायात नभएकाले पनि नेपाल यातायात नै चढ्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो ।
दैनिक उही समयमा बस चढ्ने र फर्किने दैनिकी थियो । कतिपय मान्छेहरू उही बस–स्टपमा दिनहुँ भेट हुने गर्थे ।
एउटा अधवैँसे मान्छे थियो, जो बसस्टपमा रोकिएका थुप्रै बस हेरिरहन्थ्यो, पर्खिरहन्थ्यो । अरू सबै खुला बसको पर्खाइमा हुन्थे तर ऊ भने जुन बसमा भीडभाड बढी छ, त्यसमा चढ्थ्यो । केही हप्तासम्म उसलाई नियालेँ तर उसको व्यवहार त्यही दोहोरिन्थ्यो ।
एक दिन बस निकै भीड थियो तर बसमा चढ्नासाथ महिला सिटमा बसेकी एक युवती गाडी गुड्नै लाग्दा हतारहतार उत्रिइन् । उनको छेउमा उभिएकी हुनाले मैले त्यो सिटमा बस्ने मौका पाएँ ।
भीड र गर्मी दुवैले उच्चतम डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । केही छिनपश्चात मेरो पाखुरामा केही लटरपटर गर्न थाल्यो । अनौठो अनुभूति । अन्त्यमा मेरो पाखुरामा सल्बलाउने वस्तु त त्यही भीड बस खोजीखोजी चढ्ने पुरुषको अत्यन्त संवेदनशील अङ्ग थियो । त्यो उसले लगाएको खैरो पाइन्टभित्र नै थियो तर पनि मलाई दुःख दिइरहेको थियो ।
उसको अनुहारमा आफ्ना आँखाहरू तन्काएर हेरेँ । चाहन्थेँ, मलाई रिस उठेको उसले बुझोस् । ऊ कपडाभित्रैबाट आफ्नो अङ्ग मेरो पाखुरामा घर्षण गराउनमै व्यस्त छ । मैले हेर्दा भीडले निकै अप्ठ्यारो पारेको र विवश भएर मलाई छुन पुगेको झैँ देखायो, उसको अनुहारको भावभङ्गीले । ऊ त्यस्तो नाटक गर्दै थियो ।
झ्यालपट्टि एक जना निकै मोटी दिदी थिइन् । म जति उनीतिर सर्छु ऊ त्यति मैतिर नजिकिन्थ्यो । भीड यस्तो थियो कि सिटमा बसेका भन्दा बढी उभिने थिए । उसले अझ नजिक नजिक आएर आफ्नो अङ्ग कपडाभित्रैबाट मेरो पाखुरामा घर्षण गराई नै रह्यो । म यसलाई के भनौँ, कसरी ठीक लगाऊँ भन्नेबारे सोच्न थालेँ ।
‘दाइ ठीकसँग उभिनोस्...’ यसो भने कसो होला भन्ने सम्झिएर भन्न लाग्दै थिएँ, ऊ उत्रिने तरखर गर्न थाल्यो । बस रोकियो । ऊ ढोकातर्फ लाग्यो । पाखुरा, जहाँ उसले घर्षण गरेको थियो, त्यहाँ चिसो भएको अनुभूति गरेँ । मेरो टी–सर्टको उक्त भाग भिजेको थियो । छालासम्म चिसो पुगिसकेको थियो ।
एक स्त्रीको पाखुराको मासुले नै पुरुषलाई स्खलित बनाउन सक्छ ? यो पुरुष शक्ति हो या स्त्री शक्ति ? आफैँसँग प्रश्न गरेँ । रहस्यको भुमरीमा फँसिरहेँ ।
भोलिपल्ट पनि ऊ अघि नै आएर बसस्टपमा बसिसकेको रहेछ । आँखाभित्र पसेको, नाक चुच्चो, साधारण नीलो पूरा बाहुला सर्ट र कालो पाइन्ट लगाएको छ । ऊ चस्मा नाकमा अड्याएर माथिबाट भीडवाला बसको प्रतीक्षामा छ आज पनि ।
उसलाई देख्नासाथ भित्रैबाट रिसयुक्त हेराइले मैले ऊतर्फ आँखाहरू तेर्स्याएँ । गजक्क परेर बस स्टपमा ऊ बसिरहेको छ । भगवानलाई पुकार्दै होला– ‘आज पनि हिजोको जस्तै एकदम भीडवाला बस पठाइदेऊ प्रभू !’
निकै भीड बस । ढोकामै केही महिला–पुरुष झुण्डिएको निकै परैबाट देखिन्थ्यो । त्यो बस देख्नासाथ उसको मुहारमा मुस्कान देखियो । ओहो ! मान्छे खुसी हुने कारण पनि केके हुँदा रहेछन् !
मलाई त्यो मान्छे देख्दा पनि रिसको आगो सल्केला जस्तो भइरहेथ्यो ।
बसस्टपमा बस रोकियो । उत्रने थोरै थिए, चढ्ने तयारीमा धेरै । जसोतसो म बसमा छिरेँ । केही पुरुष ठेलमठेल गर्दै चढे ।
एक सत्र–अठार वर्षकीझैँ देखिने युवती उभिएकी थिइन् । उनको छेउमा म पनि उभिएँ । केही समयपछि ती युवतीले अप्ठ्यारोे मान्दै मलाई ‘अलि उता सर्नुस् न’ भनिन् ।
त्यति बेला पो मैले थाहा पाएँ, उही पुरुष उनको पछाडिपट्टि उभिएको रहेछ । ऊ निष्फिक्री आफ्नो उही अङ्गलाई उसै गरी सोही कार्य गर्दै थियो युवतीको पछाडिको पृष्ठमा । निसङ्कोच ऊ भीडमा मजा लिइरहेको छ ।
‘कस्ताकस्ता मान्छे चढ्छन् !’, रिसाउँदै युवती बर्बराउन थालिन् । तर, उक्त पुरुषले थाहा नपाएजस्तो गरिरह्यो । अघिल्लो प्रतीक्षालयमा ऊ उत्रियो । त्यसपछि युवतीले लामो स्वास लिइन् ।
केही दिन त्यो पुरुषसँग देखादेख भएन । निकै दिनपछि एउटै बसमा पहिलेझैँ महिला उभिएको ठीक पछाडि उभिएर उस्तै हर्कत गरेको देखेँ । महिलाहरू तर्किन चाहन्थे तर तत्काल प्रतिकार गर्दैन थिए ।
एक दिन ऊ बसमा चढ्यो । यताउता नजर लगायो । बसमा बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो भीड थिएन । ऊ तुरुन्त उत्रियो ।
बस सधैँजसो भीड नै आउँथे । म भीडभाडमा कसोकसो गर्दै बसको पछाडि गएर उभिएँ । उही पुरुष अगाडिबाट भीडलाई छिचोल्दै म उभिएकैतिर आयो । शायद ऊ आफूलाई सहज स्थान खोज्दै थियो ।
मेरै पछाडि उभिएको मैले थाहा पाएँ । मलाई रिस हुर्हुरिएर आयो । केही छिनपछि फेरि उसले आफ्नो दुष्प्रयास सुरु गर्‍यो । उसको उक्त कुकार्यबाट उन्मुक्ति पाउनुभन्दा पनि उसलाई सजाय दिनैपर्छ भन्ने भाव उर्लिएर आयो । मेरो कुर्तामा सललाई अड्याउन लगाएको सेफ्टीपिन सम्झिएँ ।
त्यसलाई एउटा हातले बल्लतल्ल निकालेँ । एउटा हातले बसको यात्रुले समाउने डन्डीमा समाएकी थिएँ । ऊ मेरो ठ्याक्कै पछाडि आफ्नो कुकर्मलाई निरन्तरता दिँदै थियो । म जबर्जस्ती साइड लागेँ । ऊ मेरो दायाँपट्टिबाट नजिकियो ।
उसको निकै अरमट्ठ भएको अङ्गले मलाई घोचिरह्यो । असह्य अनुभूत हुन थाल्यो । त्यसरी घोच्ने काँडालाई भाँच्नुपर्छ या त कमजोर बनाउनैपर्छ– मेरो मनले भन्यो ।
हातमा भएको सेफ्टीपिनलाई मेरो हातले निकै ठाडो बनाएर समाएँ । गाडीमा भीड थियो । उसले ठाडो पारेको अङ्गलाई मेरो सेफ्टीपिनले ठीक ठाउँमा भेट्ने हो कि होइन सोच्दै थिएँ । ठीक्क ठाउँमा पार्नु थियो । अन्दाज गरेर मज्जाले घोपिदिएँ ।
‘ऐया ऐया !’ आवाज सुनियो । के भयो ? के भयो ? सबैको प्रश्नहरू ऊतिरै हुर्रिए ।
‘केही होइन, कसले खुट्टा टेकिदियो’, उसले वास्तविकता ओकल्न सकेन । मेरो सेफ्टीपिन भुइँमा खसेको थियो, टिपेँ । सेपफ्टीपिनको टुप्पोमा रगत थोरै देखियो ।
मेरो छेउको सिटमा बसेका एक भलाद्मी पुरुष उठे । ‘बहिनी यहाँ बस्नुहोस्’, उनी उभिएर मलाई बस्न आग्रह गरे ।
‘तपाईंको उत्रिने बेला भयो ?’
‘हैन, तपाईंलाई गाह्रो भएको छ ।’
‘तपाईंलाई धन्यवाद ! तपाईं मभन्दा पाको मान्छे । बस्नुहोस्, बस्नुहोस् ।’
उनी उठ्नै लागेका थिए ।
‘त्यस्तालाई त्यसरी नै ठीक पार्नुपर्छ’, उनले त्यही मान्छेलाई इङ्गित गरे ।
अर्को दिन त्यही मान्छे फेरि एउटै बसमा देखियो । ऊ निकै सजगताका साथ उभिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा त ऊ भीड बसहरूलाई छाडेर खाली बसहरूमा पो चढेको देखेँ ।
फेरि अर्को दिनदेखि मैले कहिल्यै पनि त्यो हिलो छ्यापिएको अनुहारलाई देखिनँ ।
‘जहाँ हिंसालाई सहिन्छ, त्यहाँ हिंसालाई मलजल पुग्छ र मौलाएर हुर्किन्छ । जहाँ प्रतिकार गरिन्छ, त्यहाँ हिंसाहरू उखेलिनेछन् जरैसँग’, सम्झिएँ ।
केही बेरमै गाडी स्टेसनमा पुग्यो । म ओर्लिएर गन्तव्यतर्फ लागेँ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, २६ पुस २०७६, ०२:१०:००
शीतल शर्माको ‘शितलु’ सार्वजनिक